काठमाडौंदेखि सर्लाहीसम्मको यात्रा :: बाल गोपाल देवकोटा :: Setopati
२०७८ मंसिर १० गते बिहानै अलार्म बज्यो। सायद गाँउघर तिर भएको भए भाले बासेको सुनिन्थ्यो होला तर यो ठूलो अनि व्यस्त सहरमा अलार्म अनि गाडीको आवाजसँगै आँखा खुल्यो। आजको दिन विशेष थियो, विशेष यस कारण थियो कि धेरैपछि एउटै कक्षामा सँगै पढ्दै गरेका साथीहरुसँग काठमाडौँभन्दा टाढाको बस्तीमा शैक्षिक भ्रमण गर्न जाँदै थियौं। यात्रा काठमाडौंदेखि बागमती सिँचाइ परियोजना सर्लाही सम्मको थियो।
एकाबिहानै म तयार भएर घर बाहिर रोडमा निस्किएँ। घरको गेट खोल्न नपाउँदै एक झुप्पा चिसो हावाको सिरेटोले मुखमै स्पर्श गर्यो। मङ्सिर महिनाको कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोको प्रवाह नै नगरी मेरा पाइला मैले अघि बढाएँ। साथीलाई फोन गरेर बसुन्धारा चोकमा आउनु भनेको थिए, म पुग्दा साथी आइसकेको रहेछ। पूर्व योजनाअनुसार सबैजना कलेजमा जम्मा भएर निस्किने भनेका थियौं। त्यसैले म र साथी पनि कलेज तिर लाग्यौँ।
हामी कलेज पुग्दा साथीहरु आउने क्रम जारी नै थियो। केही छिनमै सबै साथीहरु जम्मा भए। सबैको अनुहार हँसिलो थियो अनि धेरै उत्साहित पनि। नहुन् पनि कसरी, जो कि आफ्ना मनपर्ने साथीहरुसँग लामो यात्रा गर्दै थिएँ।
करिब ८ बजे निस्किने भनेको गाडी कारणवश साढे ९ बजे मात्र कलेजको प्राङ्गणबाट निस्क्यो।
ढिलै भए पनि काठमाडौंको जामलाई पछि पार्दै गाडी थानकोट पुगिसकेको थियो। गाडीका सहचालकले गाडीलाई इन्ट्री गराएर गुरुलाई अगाडि बढाउन इसारा गरे। त्यतिबेलासम्म गाडी भित्रको माहोल तातिसकेको थियो। साथीहरु गाउँदै, नाच्दै- नचाउँदै, रमाइलो गर्दै थिए भने गुरुले गीतको धुन सँगसँगै गाडीलाई नागढुंगाको ओरालोमा झार्दै थिए।
नेकपाको दशौं महाधिवेशनले गर्दा गाडी मुग्लिन-नारायणगढको बाटो नभई बाइरोड हुँदै दामनको बाटो जाने भयो। यो बाटोमा भनेजस्तो राम्रो होटल नपाउने भएको हुँदा खाना नौबिसेमै खाने निधो गरियो तर खाना भने मिठो पाइएन।
गाडीभित्र 'बाइरोडको बाटोमा धुलो उडाउँदै' भन्ने गीत बजाउँदै हाँस्दै हँसाउँदै नाच्दै नचाउँदै नौबिसेलाई फेरि फर्केर आउँछौ भन्दै बाइरोडको उकालो लाग्यौ। जंगलै जंगलको बाटो कहिले पनि यात्रा नगरेकाहरुको लागि पट्यार लाग्दो बाटो तर चराचुरुङ्गीको चिरबिर आवाजसँगै सुसेली हाल्दै गरेका रुखहरूको आवाज सुन्दै अनि बाटो छेउमै बनाएका सानासाना पूराना घरहरू हेर्दै यात्रा अगाडि बढ्दै थियो।
एक्कासी 'ड्राइभर दाइ मन पर्यो मलाई' भन्ने गीत के बजेको थियो गुरुको मुखमा हँसिलोपन सँगै गाडीको गति पनि अलिक तीव्र बन्यो। गाडी भित्रको माहोल फेरि नाच्दै नचाउँदै रम्दै रमाउँदै साथीहरुले गीतको धुनमा आफ्नो स्वर मिसाउँदै माहोल गुञ्जयमान बनाउँदै यात्रा अघि बढ्यो।
'पालुङटारको गोरुले सल्यान गाउँको बीउ खायो, कान्छी ल्याउँदा जेठी जिल खायो' भन्ने गीत बजाउँदै हामीले पालुङटारलाई पनि छोड्दै दामन पुग्यौं। दामन भन्ने ठाउँ नसुनेको सायद विरलै होलान्। भोक लागिसकेको हुनाले खाजा खाने भनेर गाडी दामनमै रोखियो। ३/४ पटक यही बाटो यात्रा गर्दा पनि मैले दामनलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएको थिएन।
यस पटक भने धित मरुन्जेल दामनलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएँ। सेल्फी डाँडामा गएर फोटो खिच्ने इच्छा पनि पूरा भयो। सुन्दा जति राम्रो छ नि दामन शब्द, त्योभन्दा पनि त्यस ठाउँको दृश्य झनै राम्रो छ। हिउँ पर्ने दामनमा चिसो बढेको देख्दा जो कोहीलाई लाग्छ पानी चिम्टाले समातौँ अनि आगो हातले भन्ने।
आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको रोजाइमा पर्ने दामनलाई अझै विकास गर्न पाएको भए पर्यटकीय हब बन्ने थियो। दामनलाई छोडने मन नहुँदा-नहुँदै पनि गन्तव्य टाढा भएको हुँदा दामनमा बिताएका पलहरुलाई मानसपटलमा कैद गर्दै हामी सिम भञ्ज्याङको ओरालो तिर लाग्यौँ।
काठमाडौँको कोलाहालदेखि अलि टाढाको सुन्दर शान्त बस्तीलाई गुडिरहेको गाडीको झ्यालबाट साथीहरु चियाउँदै थिए। बाहिरी वातावरणको जति वर्णन गर्दा पनि कमी होला सायद डाँडा काँडाको बीचमा रहेको बस्ती अनि त्यही बस्तीबाट लगेको बाटो।
आहा! कति राम्रो वातावरण हेर्दै मन लोभ्याउने त्यो सिमभञ्ज्याङको ओरालो अनि त्यस ओरालो झर्दै गर्दा लागेको हुस्सुको त कुरै छोडौं। त्यस्तो मनमोहक दृश्य देख्दा कसलाई पो रमाइलो नलाग्ला र? साथीहरूको मुहार हँसिलो देखियो अनि साथीहरुका मुखबाट गुन्जिन थाल्यो 'छेक्यो-छेक्यो देउराली डाँडा हुस्सु र कुहिरोले' गाडीभित्रको माहोल निकै नै रमाइलो बन्यो, साँच्चै यो गीतले यात्राको क्रममा निकै ऊर्जा थपेको थियो।
गुरुले भन्दै थिए, 'जस्तो बाहिरको परिवेश उस्तै गीत अनि मन मिल्ने साथीहरुसँगको यात्रा भाग्यमानीले मात्रै पाउँछ।' मैले पनि थपिदिएँ 'त्यसो भए हामी सबै भाग्यमानी भयौँ है दाइ!' उनी मुसक्क हाँसे अनि हुस्सुभित्र पसेको गाडीको स्टेरिङ घुमाउँदै गाडीलाई अघि बढाए।
दिन ढल्किँदै थियो, आज पुग्नुपर्ने अलि टाढा चन्द्रनिगापुर (चपुर) रौतहट थियो तर हाम्रा बसहरू भैंसे निस्किन पनि निकै बेर लगाइरहेका थिए। सायद सानो घुमाउरो अनि पहाडको बाटो भएर पनि होला। रम्दै, रमाउँदै आइरहेका साथीहरु कतिबेला बस भैंसे निस्केला र समथर बाटोमा चाँडो यात्रा गर्न पाइएला भनेर कुरिरहेका थिए।
अँध्यारो भइसकेको थियो। पहाडको घुमाउरो बाटो छोडेर बसहरू भैंसे पुगे, हामी सबैजना खुसी भयौँ। बसभित्र साथीहरु सबै मिलेर अन्त्रास्री खेल्न थाल्यौँ। हेटौँडा बजार पुग्दा अलि जाम भएका कारण बस विस्तारै गुड्न थाल्यो तर बस भित्रको माहोल रमाइलो नै थियो। बसहरुले पूर्वपश्चिम राजमार्ग पनि छोए तर बस सोचे जति चाँडो गुडिरहेको भने थिएन। अँध्यारो भइसकेका कारण सडकमा गुडिरहेका सवारी साधन बाहेक केही पनि देखिने स्थिति थिएन। साथीहरुलाई भोक र थकाइ पनि लागेछ क्यारे, रमाइलो बनिरहेको माहोल विस्तारै शान्त हुँदै गयो।
हेटौँडालाई छोड्दै हाम्रो यात्रा अघि बढ्यो। जंगलै-जंगलको बाटो यात्रा लामो बन्यो। होटलमा कतिखेर पुगिन्छ भन्दै बसभित्र कुरा चल्न थाल्यो। सबैजना शान्त भएर बसे। गाडी अमलेखगञ्ज पुग्यो। केही बस्तीहरु देखिए पनि फेरि जंगलकै बाटोभित्र गाडी गुड्यो। हरियो वन नेपालको धन त्यसै भनिएको होइन, जता हेर्यो रुखै रुख मात्र। यात्रा पट्यारलाग्दो बनिसकेको थियो।
हाम्रो गाडी वीरगंज, सिमरा र रक्सौलको केन्द्रबिन्दु पथलैया चोकमा पुग्यो अनि गाडीका चालकले पूर्व तिरको बाटो समाएर पूर्ण जंगलको बाटो हुँदै गाडी अगाडि बढाए।
गाडी निजगढ बाराको बाटोमा गुड्दै गर्दा सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 'निजगढ एयरपोर्ट बन्न लागेको ठाउँ यतै तिर हो' भनेर। फेरि गाडी अलि अगाडि पुगेपछि सरले 'फास्ट ट्रयाकको अन्तिम बिन्दु पनि यहीनिर छ' भनेर के भन्नु भएको थियो साथीहरु गाडीको झ्याल खोलेर हेर्न हतारिए। तर अँध्यारोमा के देखियोस्, केही पनि देखिएन। पुल कटेर गाडी निजगढ बजारमा पुग्यो। अबेर भइसकेको थियो, बत्तीले निजगढ बजार झलमल्ल थियो तर हाम्रो यात्रा झलमल्ल बलेका बत्ती अनि बजार हेर्दै अघि बढ्दै थियो।
निजगढ बजारदेखि अगाडि बढदै गर्दा फेरि पनि जंगलको बाटोमा रात्रिकालीन यात्रा गर्दै थियौँ। शान्त वातावरण सबै थाकिसकेका थियौँ। होटल कति बेला पुगिन्छ भनी सबैका आँखा मन मस्तिष्क आतुर थिए। सायद यति धेरै यात्रा गरियो तर यो नै पहिलो पटक होला होटलको रूममा कति बेला पुगौँ भनेर लागेको। लाग्न पनि किन नलागोस्, काठमाडौं छोडेकै १२ घण्टा भइसकेको थियो।
घडीको सुईले नौ बजेको जनाउँदै थियो तर गाडी भने पूर्वपश्चिम राजमार्गमा गुड्दै थियो। केही मिनेट गाडी गुडेपछि करिब साढे नौ बजेतिर गाडी रोकियो। बाहिर हेरेको झलमल्ल बत्ती बलिरहेका थिए हामी चपुर, रौतहट आइपुगी सकेका थियौँ। सबैजना गाडीबाट ओर्लिएर होटेल तिर लाग्यौँ। यात्रा लामो भए पनि बाटोमा रमाइलो गर्दै आएका कारण यात्रा रमाइलो नै रह्यो अनि पहिलो दिनको यात्रा यही चपुर रौतहटमै आएर विश्राम लागियो।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस ६, २०७८, ०४:४३:२३